ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဆန္ဒပြပွဲ”
သေချာတယ် ကိုပေါကိုတော့ သူတို့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး :D ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုမျိုး အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးဆုံးသွားတာ အများကြီး ၀မ်းသာပါတယ် :)
>>> ပန်ဒိုရာ.......ပေးဆပ်မှုတိုင်းဟာ အချည်းနှီးတော့ မဖြစ်သွားပါဘူး။ အခုဆိုရင် လူအတော်များများဟာ လွတ်လပ်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ပိုပြီးနားလည် တန်ဘိုးထားလာကြပါတယ်။ သည့်အတွက် ထိုက်တန်တဲ့ ရင်းနှီးမှုကို ပေးဘို့လည်း အသင့်ဖြစ်လာကြပါတယ်။
>>> မလင်းလက်.....လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ သူတို့ သုံးယောက်လောက် ၀ိုင်းမရင်တော့ ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်။ မနေ့ကပွဲမှာ အားလုံး ပါဝင်ပံ့ပိုးမှုကြောင့် အောင်မြင်တာပါ။ နောက်တခုက တိုက်ပွဲတခုကို အတူတိုက်ဘူးရင် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ် ပိုရှိလာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကပေါ....အောင်အောင်မြင်မြင် အေးအေးချမ်းချမ်းပြီးသွားလို့ စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့မနက်သတင်းစာမှာပါမှ သိလိုက်ရတယ်။
အရမ်းပဲ ကျေနပ်တယ် ။
ဗမာပြည်က ပြည်သူတွေကို သတိထားဖို့
This is the act of bravery!
ဟိုးအရင်ကတည်းကညီမလေးကိုမေးဖူးတယ်။ မောင်လေး အရေးကောင်းတာနဲ့
blog ရေးဖို့ ။ မောင်လေးအချိန်မရှိတာသိလို့ဆက်မတိုက်တွန်းမိပါဘူး။အခု ပေါ်တာတာ
၀မ်းသာတယ်။ ဒို့တွေ အားလုံးပြန်တွေ့ ကြတာပေါ့ ။ ကျမ်းမာအောင်နေ။ ညီမလေးကိုလည်းဂရုစိုက်။ မကြီး အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့မဆက်သွယ်မိတာ။
မမ blog မှာ..link ထည့်ထားမယ်။ လာဖတ်ရလွယ်အောင်။
welcome to blogger’s world!
ကလူသစ်….ကလေးနေကောင်းလား။ တကြိမ်တော့ တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဗျာ။
မခင်မင်းဇော်ရေ….အာဆီယံလူကြီးတွေကလည်း ကျွဲပါးစောင်းတီးရသလိုပါဘဲဗျာ။ အဲ…အများစုကလည်း ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲတွေ ဖြစ်နေတာကိုး။
ကိုအင်အယ်တီ…..လာဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူး။ ဒီအေအက်စ်အက်စ်ကေ အီးဂရုပ် ထဲမှာ ရေးတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ စာတွေကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံတယ်။ ကြိုက်တယ်ဗျိုး။
အစ်မကြီးသဒ္ဒါ…..လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တီးရှော့ပ်ပျက်ပြီးကတည်းက ချာလပတ်ရမ်းနေတာ အခုမှ နည်းနည်း အနည်ထိုက်လာတယ် အမရေ။
ပီတိ…..ပီတိရဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖတ်ရတဲ့အခါ ပီတိ တွေ ဖြာသွားပါတယ်။း-)
ကြိတ်ထားဗျို့ ကိုပေါရေ.. လုပ်ကိုင်သွားပုံလေးတွေက သပ်ရပ်တယ်ဗျာ
စီဘောက်မတွေ့လို့ ကွန့်မန့်မှာ ၀င်နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်။
တချိန်တုန်းက စင်ကာပူမှာ ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့ ဘယ်သူ စိတ်ကူးရဲမလဲ နော့။ အခုတော့ ဂုဏ်ယူစရာဗျာ။
ရဲစခန်းမှာ ၂ ကိုလည်း ဆက်ရေးပါအုန်း။ စောင့်ဖတ်နေမယ်။ တခုတော့ ဆရာ ၀င်လုပ်ပါရစေဗျာ။
သူတို့ စိုးရိမ်ချက်ကို နားလည်ပေးလိုက်ပါ။ ရေရှည်မြန်မာ့အရေးကို ငဲ့ပြီး စင်ကာပူအတိုက်အခံတွေနဲ့ မလုံးမိအောင် သတိထားစေချင်ပါတယ်။
အာဆီယံမှာ တချို့အစိုးရတွေ မြန်မာ့အရေးကို မဖြစ်မနေ ၀င်ပြောလာကြတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာ သူတို့ အတိုက်အခံတွေ မြန်မာ့အရေးကို အသုံးချပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ယူသွားမှာ စိုးရိမ်ကြတဲ့အချက်လည်း ပါတယ်။ အာဆီယံ ကော့ကက်စ် အောင်မြင်လာတာ သူတို့အတွက် စိတ်မသက်သာစရာ မဟုတ်လား။
လောလောဆယ်မှာ အာဆီယံဒီမိုကရေစီရေးထက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်ရင်း ဇောကပ်သွားမှာစိုးလို့၊ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါဗျာ။ လေ၀င်ပေါတယ်ထင်လည်း ခံပါ့မယ်။
အားလုံး ကြံတိုင်းအောင်လို့ ဆောင်တိုင်းမြောက်ကြပါစေဗျာ။
ကိုကဒေါင်း....မျှော်လင့်တုန်း ကြော့ကွင်းက ပြန်လာတဲ့အတွက် ၀မ်းမြောက်ရပါတယ်။း-)
ကိုဝေလင်း....လာလည်တဲ့အတွက်ရော၊ စေတနာအရင်းခံနဲ့ မြော်မြော်မြင်မြင် ထောက်ပြ အကြံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လှပါတယ်။ ကိုဝေလင်းပြောတဲ့အထဲက “ရေရှည် မြန်မာ့အရေးကို ငဲ့ပြီး” ဆိုတဲ့အချက်ကို အထူးအာရုံစိုက်မိပါတယ်။ ဒီအချက်က ကျနော်တို့အထဲမှာလည်း အမြဲတစေ ဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အချက်ပါ။ ကျနော်တို့ ရှေ့လျှောက် အထူးသတိထားလုပ်ပါမယ်။ ရဲစခန်းမှာ...၂ ကို ဒီနေ့ဘဲ တင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုဝေလင်းရဲ့ ကဗျာများကို နှစ်သက်ပြီး အတွေးအခေါ်များကို လေးစားပါတယ်။
win myint 19862003 said...
AsaEx-RIT Student..I am very proud of you and your teams who loved our country (BURMA)
We Burmese from Japan are very admire of your work..good job..well ..be together..and fight for our beloved country and our people..
Win Myint 86 Ec.E
လုပ်သွားတာလေး သပ်ရပ်တယ်ဗျာ၊ ရေလည်သဘောကျတယ်။
ကိုဝင်းမြင့်…………အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အတူ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်ကြတာပေါ့ဗျာ။
ကိုတီဇက်အေ…….လာလည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ ကျနော်ကတော့ ကိုတီဇက်အေ ဘလော့ဂ်က အစားအသောက်တွေ လာသွားရည်ကျနေကျ။ ဘလော့ဂ်ဒင်နာ လို့တောင် ပြောရမလားမသိဘူး။ ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်အကြောင်းတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားဘွယ် ကောင်းလှပါတယ်။
ကိုပေါ .. ဒီပို့စ်ကို ဆုံဆည်းရာ ဘလောဂ့်မှာ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ။ တခြားသူတွေလည်း သိရအောင် ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွက် မှတ်တမ်းတင်စရာတခုလို့ မြင်ပါတယ် ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....ကို Thway Ni ။
We are pround of you all.
very good. touch mealot.
To Kay and Khayaphyu,